Ayaan Aadan Cabdullahi | allsanaag
Ayaan Aadan Cabdullahi
Xildhibaankii ugu da’da yaraa ee loo soo doortay Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Gabadhan D’ada yar ee ku dhalatay Luuq, Gedo, ee kasoo jeeda beesha Hariin waxay ilma adeer la tahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta-gareen, waxayna bedeleysaa Senator Ilyaas Cali Xasan oo kasoo jeeda beesha Eelaay.
Kursigan oo ay laheyd beesha Eelaay, ayuu gebi ahaan Lafta-gareen kasoo wareejiyey, wuxuuna siiyey beesha Hariin, si uu kursiga ugu fadhiisiyo Ayaan.
Dr. Xuseen Maxamed Daahir, oo isna maanta laga soo doortay Koonfur galbeed, wuxuu kasoo jeeda beesha Boqol Hore, wuxuu qabaa Ilhaan Mahad Cabdirahman oo sidoo kale ay isla dhasheen xaaska Lafta Gareen Zamzam Mahad Abdirahman.
← Guddiga doorashada Dirta Waqooyi Soomaaliya oo diiday in Midowga Afrika dhex-dhexaadiyo iyada iyo Kenya →